Caadooyinka Bortuqiiska | Safarka Absolut
Waxay ku taal koonfurta-galbeed ee qaaradda Yurub, Bortuqiiska waxay xuduud la leedahay Spain dhinacyadeeda bariga iyo woqooyiga, waxayna eegtaa dhinaca Atlantic iyo galbeedka iyo koonfurta. Iyada oo leh hidaha iyo dhaqanka, iyo muuqaal ay kujiraan buuro fawdo ah, bannaanka qorraxdu qoyan tahay iyo mayl iyo mayl xeebo aad u qurux badan, Portugal waxay si diiran u soo dhawaynaysaa booqdayaasha adduunka oo idil.
Boortaqiisku wuxuu ku fadhiyaa 92,212 km² waana wadanka ugu galbeedka badan qaaradaha yurub. Waddanku wuxuu u qaybsan yahay dhowr gobol, mid walbana leh muuqaal iyo dabeecad u gaar ah. Waqooyiga, Miño waa cagaar, iyadoo ah dad horumarsan, halka deriska ay yihiin Kadib-os-Montes aad buu u jilicsan yahay iyo in yar oo soo booqda dalxiisayaashu.
1 Dhaqanka maxaliga ah iyo luuqada Burtuqiiska
2 Sidee Ururada Bulshadu u shaqeeyaan
3 Kulamada ganacsiga iyo la talinta maamulka
Dhaqanka maxaliga ah iyo luuqada Burtuqiiska
Bortuqiiska caadi ahaan waa khafiif, naxariis iyo xishood badan. Soo-booqdayaasha dadaalka ugu jira inay bartaan xitaa ereyo ama weedho fudud sida Waad salaaman tahay (bom dia), Mahadsanid (obrigado) iyo nabad galyo (nabad galyo) waa la qadarin doonaa.
Qoysku waa aasaas hab nololeedka Boortaqiiska, wuxuuna ka hor mariyaa dhammaan cilaaqaadka kale, oo ay ku jiraan ganacsiga. Shaqaalaynta xubnaha qoyska meherad dhexdeeda waxaa loo arkaa inay tahay wax caadi ah in laga sameeyo Bortuqiiska, maxaa yeelay macno ayey u samaynaysaa inay ku hareereeyaan dadka aad taqaan.
Bortuqiiska sidoo kale waa inuu ku sameeyaa muuqaalka iyo ixtiraamka. Si fiican u labisasho, munaasabad kasta, waxaa loo arkaa inay tahay calaamad ixtiraam, gaar ahaan jiilkii hore. Waxay kuxirantahay xiriirkaaga qof dhintay, Baroor-diiqda ayaa socon karta dhowr sano, qaar ka mid ah carmalladda miyiga ku noolna waxay u barooranayaan inta noloshooda ka dhiman
Boortaqiiska waa ummad leh xeebo badan oo xeebeed, sidaas darteedna waa iyada dhaqanka cunitaanka sardines, makkerel iyo kuwa caanka ah bacalhau (qalalan, kood cusbo leh) oo si kalsooni leh loogu helo menusyada dhammaan noocyada makhaayadaha: suxuunta doofaarka sidoo kale waa wax caadi ah, sida doofaarka basbaaska leh iyo sausages chorizo ​​iyo digir la kariyey. Boortaqiiska ayaa jecel iyaga macmacaan iyo keeg, iyo booqashada dukaan la dubo ayaa soo bandhigi doona dhammaan noocyada macmacaanka ah.
Boortaqiiska waxay leedahay dabaaldegyo badan oo lagu xuso maalmo barakeysan oo kala duwan, iyo sidoo kale dhowr ciida oo sanadle ah oo muhiim ah, oo ay ku jiraan Maalinta Boortaqiiska (Juun 1), Qaadashada Bikradda (Ogosto 15) iyo Maalinta Jamhuuriyadda (Oktoobar 5th). Intaa waxaa sii dheer, magaalooyinka iyo magaalooyinka guud ahaan dalka guud ahaan waxay leeyihiin xaflad xagaaga ah, inta badan oo ay ku jiraan dibi-dagaal ama dibi dagaal magaalada dhexdeeda.
Sidee Ururada Bulshadu u shaqeeyaan
Maaddaama Boortaqiisku yahay qaran halkii muxaafid ah oo la keydiyay, Dabeecadda xiisaha leh ee dalxiisayaasha waxaa loo arki karaa edeb darro. Ku salaantu waa inay noqotaa mid rasmi ah oo xushmad leh, iyo cinwaanada rasmiga ah, sida Mudane iyo Marwo waa in marwalba la isticmaalo, ilaa lagugu martiqaado inaad magacyada adeegsato. Waa caado in la is gacan qaado dadka aan si fiican u aqoon, iyo saaxiibada dhow, waa wax iska caadi ah rag isku duubay iyo dumarka dhunkasho dhaban kasta, min midig ilaa bidix.
Daahida kulanka waxaa loo arkaa edeb daro, had iyo jeer isku day inaad waqtiga ilaalisoAma ballan ganacsi ama haddii lagugu casuumo makhaayad ama casho guriga saaxiib ama saaxiib. Haddii lagugu casuumo cunto qof gurigiisa jooga, waa caado inaad keento hadiyad yar laakiin fikir leh, sida shukulaatada ama ubaxyada.
Wadamo badan, saxan nadiif ah dhamaadka cuntada ayaa calaamad u ah inaad ku raaxeysay cuntada, laakiin Boortaqiiska, waxaa loo tixgeliyaa edeb waxoogaa cunto ah ku dhaaf saxanka mar haddii aad dhamayso.
Sida caadiga ah, Bortuqiisku ma tago is dhexgalka bulshada ka dib shaqada inta lagu jiro usbuuca, waxayna isku maaweeliyaan kaliya dhamaadka usbuuca.
Kulamada ganacsiga iyo la talinta maamulka
In kasta oo Boortaqiisku daahi karo kulammada, haddana waxaa loo qaadan doonaa edeb darro. Haddii lagu sii hayo sugida kulanka ganacsiga, waa muhiim inaadan xanaaqin.
Kulan ganacsi kasta waxay u egtahay inuu wanaagsan yahay heerka wadahadalka taasi lama xiriirto kulanka. Tani waa waddo ay asxaabtaada reer Bortuqiisku ay kugu baran karaan, waana inaadan isku dayin inaad ku deg degto kulanka ama aad ku jahwareerto maxaa yeelay barnaamijkaaga si taxaddar leh loo qorsheeyay waa la iska indhatirayaa Haddii aad filayso in go'aannada ganacsiga ee la gaadhay intii shirku socday la raaco, waxaad u badan tahay inaad niyad jabto, maadaama go'aannada ay badanaa ka dhacaan meel ka baxsan kulammada rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Caadooyinka Bortuqiiska
Waxaan ahay Boortaqiis.
Xarumaha wax laga iibsado ma furna 10:00 ilaa 23:00. Waxay furan yihiin 9:00 ilaa 24:00.
Ku jawaab Bia
aad u fiican runtii waan u diraa si aan u arko inay aad u qurux badan yihiin
Ku jawaab nikool
Hagaag macluumaadkani wax buu iiga caawiyay, waxaan bartay gastronomy waxaanan ku jiraa cilmi baaris buuxda oo ku saabsan dhamaan cuntooyinka macmacaanka ee gaastoriyada bortuqiiska food. Xitaa waa inuu jiraa bog aan kaheli karo waxbadan oo iga caawin kara waxbadan bandhiggeyga ... hadii uu jiro boggaasna u soo dir x boggan px ....
Ku jawaab lau -peru
Haye, waxaan ahay yessica waxaanan u maleynayaa in dalka Burtuqiisku uu aad u qurux badan yahay waxaanan rabaa inaan iraahdo waxaan raadinayaa saaxiib oo waan heli karaa
Ku jawaab yessica
ilaa Portugal iyo Mexico wiilasha bitches ayaa sheegay in ay tahay sharaf Mexico
Ku jawaab tinoco
Waan jeclahay xayeysiinta
Jawaab Ana San Román
Waad salaaman tahay, taasi ima adeegayso hehe = (
Ku jawaab KarlithaA
Muxuu yahay bummer aanan ka heli karin caadooyinka Pottugesa
Ku jawaab luisana
Waddan aad u qurux badan, nasiib ayaan u yeeshay inaan booqdo dhawr sano ka hor waana run oo dadku waa kuwo kalgacal badan oo diirran, sidoo kale sababo shaqo ayaan la joogay koox reer Boortaqiis ah oo Aasiya ku nool, dad aad u fiican, kalgacal kalgacal leh, saaxiibtinimo leh , saaxiibo wanaagsan, ku wanaagsan cunista kalluunka. Dhunkasho dhammaan boggaga.
Ku jawaab karla selena
Waxaan ubaahanahay caadooyinka Portuguese
Ku jawaab kelimar gallardo